Hetsika Aorian’ny Vovonana: Andeha atao malaza ny GV! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 18:08 GMT
Sary natambatra tao amin'ny Pixabay sehatra ho an'ny daholobe/CC0 Creative Commons.
Nandritra ny vovonana GV tany Colombo izahay nandre ireo mpanatrika maro niresaka ny hoavy mahafinaritra sy fitomboan'isan'ireo mpamaky anaovan-dry zareo vina ho an'ny GV. Fanampin'izany, nisolotena ireo ekipany mpanoratra sy mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo mavitrika ihany koa ny sasany tamin'izy ireo, sy ireo tonian'ny Efitra Famoaham-baovao ary ireo tonian'ny Lingua.
Na izany aza, nanamarika ihany koa ireo mpikambana GV maro (na tao amin'ny Vovonana na tany amin'ny fivoriana hafa) fa tsy mahalala na inona na inona momba ny GV ary tsy mieritreritra ny hamaky azy ny manodidina, ny fianakaviany na ny namany. Mahamenatra izany, satria tokony ho loharanom-baovao matotra sy azo antoka no hamantarana antsika any ivelan'ny vondrom-piarahamonina GV ! Ny atrikasa “Ndao atao malaza ny GV !” izay natao tany Colombo tamin'ny 30 Novambra, 2017, dia fivoriana fikaonandoha voalohany momba ny zavatra azontsika, mpikambana GV atao momba izany.
Nahitana fifanakalozan-kevitra miisa 3 tao anatin'ity atrikasa feno fandaharam-potoana sy lava ity :
Inona no tanjon'ity atrikasa ity?
Ahoana no fomba hamaritantsika ny hoe “malaza”?
Iza no tiantsika hosarihina ?
Ahoana no fomba hisarihantsika azy ireo ?
Ahoana no fomba handrefesantsika fa ho tratra ny tanjontsika?
Inona no paikady sy teti-panorona noresahintsika?
Famoronana paikady fanentanana isaky ny telovolana
Famaritana ny marika GV
Famoronana “soso-kevitra tsara kokoa”
Fampiroboroboana fomba vaovao hizaràna votoaty
Noho izany … Inona no ataontsika manaraka?
Nanolo-tena ny hitarika ireto lohahevitra manaraka ireto ny mpandray anjara eto ambany :
Mamaritra ny refy (fotoana, sns…) – Kevin, Nevin
Manangana teny faneva – Emma, Elisa, Gohary
Teti-panorona fampielezana – Faisal
Fanomeza-marika maro – Saffah
Raha mahaliana anao ny iray amin'ireo lohahevitra ireo dia mifandraisa amiko amin'ny alalan'ny mailaka ao amin'ny kaontiko na amin'ny iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo miandraikitra izany!